कसरी Ask.com ब्राउजरबाट पूर्ण हटाउन?
हामी Ask.com हटाउन कसरी प्रश्न ध्यान गर्ने निर्णय गरे। यसलाई इन्टरनेटमा काम सुविधा सुविधायुक्त एक नम्बर छ किनभने हामी, एक खोज इन्जिन, जो बेकारी भनिन्छ गर्न सकिँदैन बारेमा कुरा गर्दै छन्। प्रणाली प्रतियोगिहरु बीचमा आफ्नो वैध स्थान जितेको छ, आफैलाई समय जाँच गर्नुहोस्। अर्कोतर्फ, तरीकाहरु आफ्नो ग्राहकहरु हृदय जित्न विकासकर्ताले, धेरै प्रेरक छ गर्न resorted। तर यो दृष्टिकोण सबै प्रयोगकर्ताहरू द्वारा साझेदारी गरिएको छैन।
को Ask.com के हो?
सुरुमा Ask.com एकदम खोज इन्जिन (कम्तिमा इन्टरनेट को अंग्रेजी बोल्ने खण्ड मा) संसारका चिरपरिचित एक थियो। यसको इतिहास खोज इन्जिन को नाम आस्कजीभेज Query थियो, र यो आधुनिक संसारको खोज इन्जिन गुगल र याहू रूपमा कार्य को नै सेट मा बनाइएको थियो, फिर्ता जान्छ 15 भन्दा बढी वर्ष। फोटो, स्थान, ब्लग को नम्बर र यस्तो इन्साइक्लोपीडियाहरूले, शब्दकोश, नक्सा र अरूलाई रूपमा सबै सेवाहरूमा पहिले नै परिचित लागि खोज: खोज इन्जिन मा उल्लेख, यो सेवाहरूको यसको आफ्नै सेट छ। अन्त र यी सेवाहरूको त्यहाँ एक कुख्यात Ask.com उपकरणपट्टी थियो।
यो खोज इन्जिन को एक विशिष्ट विचार एक प्रमुख चरित्र Jeeves, वास्तवमा Jeeves (Jeeves), सबै भाषामा एक सरल र बुझ्ने मा अनुरोध गरिएको मुद्दाहरू मा पोस्ट गरिएको छ जो सोध्नुहोस् छ। आफैमा, Jeeves - एक काल्पनिक चरित्र र Pelham wodehouse गरेको Jeeves र Wooster को रोमांचक बारेमा comedic छोटो कथा र उपन्यास को एक श्रृंखला एक सन्दर्भ छ। खोज इन्जिन मा एक वर्ण उपस्थिति अक्सर कम्पनीको मुख्यालय मा गरेको निर्णय आधारमा परिवर्तन।
लगभग 2008 मा, धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ता खोज इन्जिन र यसको हस्तक्षेप उपकरणपट्टी एक समस्या देखा पर्न सुरु भएको छ। अक्सर Ask.com उपकरणपट्टी यस्तो Intenet एक्सप्लोरर, गुगल Chrom वा Firefox रूपमा ब्राउजरहरूमा समावेश गरिएको छ। यो विस्तार को गतिविधि ब्राउजर असर गर्न सक्छ भन्ने धेरै प्रयोगकर्ताहरू याद छ: लोड क्षमता, सञ्चालनको गति कम जो प्रयोगकर्ता सहभागिता बिना सेटिङहरू अनधिकृत परिवर्तन र ब्राउजर-आधारित विज्ञापन को एक ठूलो संख्या को उद्भव। र धेरै प्रयोगकर्ताहरू कसरी हटाउन बारेमा Ask.com आश्चर्य गर्न थालेका छौं आफ्नो व्यक्तिगत कम्प्युटरबाट।
व्यक्तिगत कम्प्युटरमा खतरा को Ask.com खोजन
गरेको स्थापित आवेदन र सबै भन्दा वर्गीकरण मा विस्तार Ask.com एक संभावित अनावश्यक कार्यक्रम रूपमा मानिन्छ र सफ्टवेयर खुलेर उपलब्ध आफ्नो व्यक्तिगत कम्प्युटरमा प्राप्त भन्ने तथ्यलाई सुरु गरौँ। सकेसम्म यो समस्या आफ्नो पीसी छुटकारा होइन भने, यो अन्य भाइरल आवेदन र कार्यक्रम को उद्भव र विकास गर्न योगदान गर्न सक्छन् भनेर मनमा राख्नुहोस्।
यी समस्याहरू समय देखि उत्पन्न हुँदा मालवेयर छ तपाईंको कम्प्युटरमा स्थापित (अन्य सफ्टवेयर मार्फत)। त्यसपछि, यो आफ्नो प्रणाली र आफ्नो ब्राउजर सेटिङ परिवर्तन गर्न सुरु हुन्छ। त्यो किन Ask.com हटाउन कसरी प्रश्न, ढिलाइ हुन सक्दैन छ।
कम्प्युटर मा Ask.com लक्षण
त्यहाँ कम conspicuous गर्न overt थुप्रै संकेत हो। पहिलो प्रकटीकरण - सुरुमा साइट Ask.com खोज इन्जिन मा आफ्नो गृह पृष्ठ परिवर्तन। यो पनि विज्ञापन अक्सर आफ्नै पृष्ठ थप्दा, तपाईंको बुकमार्क असर गर्छ। जब तपाईं निकै परेशान र इन्टरनेटमा आफ्नो काम बाधा हुनेछ कि साइट को कुनै पनि क्षेत्र मा क्लिक आफ्नो ब्राउजरमा नै प्रकट हुनेछ भन्ने अर्को परिवर्तन विज्ञापन को एक उच्च सामग्री संग खराब साइटहरु पुनः निर्देशित छ। Ask.com पनि यो हार्ड ड्राइभमा कुनै पनि जानकारी आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त गर्न चाहने अनलाइन fraudsters को धेरै को लागि सजिलो र डाटा (लगइन र पासवर्ड) आफ्नो अनलाइन खाता समाप्त पार्छ। यो Ask.com देखि परिवर्तन सजिलो प्रवाह सेटिङ संग कम्प्युटरमा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने भाइरल कार्यक्रम को सहायता संग गरेको छ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो कार्यक्रम तपाईंको सञ्चालन प्रणाली, व्यक्तिगत डाटा लागि बस खतरनाक छ, र केही गम्भीर अवस्थामा र प्रोसेसर प्रदर्शन को लागि छोड्नुहोस्।
त्यसैले, Ask.com बारेमा केही प्रश्नहरू विचार गर्नुहोस्। कसरी हार्ड डिस्क बाट पूर्ण हटाउन? यसलाई जसलाई त्यो आफ्नो पीसी मा पायो साथ परिभाषित र बोक्न र फाइल, उचित छ, र वास्तवमा उहाँले Ask.com कार्यक्रम। तपाईं जान आवश्यक हुनेछ हार्ड ड्राइभ हटाउन "कन्ट्रोल प्यानल" (जो तपाईं डेस्कटप को तल बायाँ मा "सुरु" बटन क्लिक गरेर पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ)। को "कार्यक्रममा र सुविधाहरू" ट्याबमा, कार्यक्रम को नाम बटन हटाउन र निडर भई दायाँ प्रेस स्क्रोल "एक कार्यक्रम अस्थापना"। तपाईं Windows को आठौं संस्करण प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं बस विन्डोज मेनु कल, र त्यहाँ इच्छित बटन, "कन्ट्रोल प्यानल" हुनेछ।
कहिलेकाहीं यो किनभने कार्यक्रम (को सूची मा निर्दिष्ट पूर्ण बिभिन्न हुनेछ नाम) को नाम को कठिन हुन सक्छ, वा यदि यो एक सेट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन। यस मामला मा, एउटै तरिकामा आफ्नो कम्प्युटर भर्खर स्थापित संदिग्ध कार्यक्रम हटाउनुहोस्।
ब्राउजर संग सञ्चालन
गरेको Ask.com ब्राउजर हटाउन कसरी नियालेर हेरौं। प्रक्रिया तपाईं माथि मदत छैन भने र सेवा ब्राउजरमा अझै पनि छ, त तपाईं थोडा अन्य तरिका जाने र सीधा ब्राउजरबाट मेटाउन आवश्यक छ। तिनीहरूले प्रत्येक अन्य फरक र कसरी एक खोज इन्जिन पनि थोरै मतभेद हुनेछ हटाउन। किनभने प्रत्येक ब्राउजरमा यी मतभेद तपाईं दृष्टिकोण लागू गर्न चाहन्छु।
अर्को, हामी कसरी इन्टरनेट एक्सप्लोरर देखि Ask.com हटाउन छलफल हुनेछ। यो, खुला इन्टरनेट एक्सप्लोरर गर्न र ब्राउजर सेटिङ बटन मा क्लिक (एक गियर जस्तो देखिन्छ) माथिल्लो दायाँ कुनामा र क्लिक गर्नुहोस् "इन्टरनेट विकल्पहरू।" यो मेनु, तपाईं "विकसित" भनिने लाइन पाउन र रिसेट बटन थिच्न गर्न आवश्यक हुनेछ। कि पछि, तपाईं मात्र चेक मार्क अर्को लाइन गर्न "व्यक्तिगत सेटिङ मेटाउनुहोस्" र पुन: क्लिक गर्नुहोस् "ब्राउजर सेटिङहरू पुन सुरु हुँदै" हेर्नुहोस्। यो प्रक्रिया पूरा भएपछि, सेटिङ बाहिर निस्कन र ठीक बटन थिचेर परिवर्तन गर्न सहमत हुनुहुन्छ। निकास र ब्राउजरमा फिर्ता जाने - परिवर्तनहरू प्रभाव।
तपाईं एक मानक ब्राउजर ओएस किनभने भविष्यमा प्रयोग गर्छन्, एउटा खराब कार्यक्रम मा नछोड पनि यदि यो समस्या को कारण फेरि आउन सक्छ, ध्यान दिनुहोस्।
Ask.com ब्राउजर फायरफक्स कसरी हटाउन सिक्न
को मोजिला फायरफक्स ब्राउजर को लागि, लडाई लागि अर्को प्रक्रिया छ। आफ्नो ब्राउजर मा हस्ताक्षर र शीर्ष प्यानल उपकरण संग आइकन फेला। उसलाई उप-श्रेणी "सहायता" जहाँ तपाईं फेला पार्न र समस्या निवारण सम्बन्धित एउटा वस्तु चयन आवश्यक मेनु, प्रविष्ट मार्फत। त्यसपछि क्लिक जो भन्छन् कि "उन्मूलन समस्या बारेमा जानकारी" माथिल्लो दायाँ कुनामा पाउन सकिन्छ, "फायरफक्स रिबुट"। जब पुष्टि स्क्रिन देखिन्छ, र "पुन: बुट" ब्राउजर सबै सेटिङहरू Ask.com संग रिसेट छन् बन्द भएपछि क्लिक गर्नुहोस्। माथि बस क्लिक गर्नुहोस्, परिवर्तन सूची एक विन्डो पप "समाप्त।"
गुगल क्रोम खाली
पहिलो चरण, खोल्न ब्राउजर एक्सटेन्सन Google सेटिङ क्रोम (माथि दायाँ तीन तेर्सो रेखा, उपकरण)। Ask.com विस्तार खोज्नुहोस् र अगाडि टोकरी मा क्लिक गर्नुहोस्। पनि मेनुमा अन्य विस्तार गर्न ध्यान। खराब कार्यक्रम सफलतापूर्वक अन्य तिमीलाई पनि आवश्यक खुराक थप्न सक्छ, र तपाईं तिनीहरूलाई केही अज्ञात छन् भने, यो तिनीहरूलाई हटाउन उचित छ। साथै, तपाईंले Ask.com गृह पृष्ठ हटाउन कसरी बारेमा कुनै प्रश्न छ भने, तपाईंको ब्राउजर विकल्प जाने र त्यसपछि "व्यवस्थापन खोज इन्जिन" (खोज खण्ड) मा क्लिक गर्नुहोस्। चयन मेनुमा, इच्छाएको खोज इन्जिन निर्दिष्ट र यो पूर्वनिर्धारित ब्राउजर मा राखे।
रजिस्ट्री सफाई र एन्टी-भाइरस को प्रयोग
यी सबै प्रक्रिया पछि, विरोधी-भाइरस को मद्दतले सिस्टम परीक्षण र मालवेयर को remnants हटाउन आफ्नो रजिस्ट्री सफा गर्न निश्चित हुन। एन्टिभाइरस प्रोग्राम को एक धेरै तपाईंलाई पूरा पीसी स्क्यानिङ को विकल्प दिन, र तिनीहरूलाई को धेरै देखि, तपाईं कसरी vospolzovatsya निर्णय। तर तपाईं मौका छ भने, यो धेरै एन्टिभाइरस द्वारा जाँच गर्न राम्रो छ। या त फरक विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरेर वा स्वयं - हटाउन कसरी Ask.com रजिस्ट्रीमा लागि धेरै विकल्प पनि छन्। रजिस्ट्री सफाई स्वयं पर्याप्त ज्ञान भाइरस बाट शुद्धीकरण सिस्टम पूरा गर्न आवश्यक छ, र तपाईं गल्ती बनाउन भने, यसलाई आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम को प्रदर्शन समस्या निम्त्याउन सक्छ।
यस कारण, यो रजिस्ट्री सफा गर्न उपकरण प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। मात्रा र आफ्नो एकदम विविध गुणस्तर, साथै निःशुल्क संस्करण तल आफ्नो मूल्य। AdwCleaner उदाहरण सफाई विचार गर्नुहोस्।
यसलाई विशेष पत्ता लगाउन र कुन डाउनलोड सफ्टवेयर संयोजनमा सञ्चालन उपकरणपट्टी, विज्ञापन विस्तार, र यति मा।, हटाउन डिजाइन गरिएको छ। यो कार्यक्रम प्रयोग एकदम सरल छ - स्थापना पछि, तपाईं मात्र स्क्यान बटन थिच्न आवश्यक र परिणाम पछि जुन तपाईँले सबै मालवेयर हटाउन एक उपकरण दिनेछु। हामी के तपाईं सूची स्क्यान सुझाव - यो मा तपाईं अझै पनि आवश्यक हुन सक्छ कि पाउन सक्छ। पछि रजिस्ट्रीमा सफाई र एन्टिभाइरस स्क्यानिङ आफ्नो कम्प्युटर पुनः सुरु गर्नुहोस्। त्यसैले हामी Ask.com कसरी हटाउन बाहिर समझ।
को MD5-ह्यास कसरी decipher गर्न: एक सरल विधि
कसरी आफ्नो कम्प्युटरबाट ad-tizer.net हटाउन? कसरी ad-tizer.net ब्राउजर हटाउन?
कार्यक्रम फ्रेम प्रदर्शन विज्ञापन कसरी हटाउन?
Mystart: स्पाम कसरी मेटाउन?
एक ट्रोजन भाइरस कसरी हटाउन?
बाट thrush के देखिन्छ? जानकारी - हालतमा सुरक्षित भइरहेको!
"साम्राज्य" (को टावर), "मास्को शहर"। "साम्राज्य": ठेगाना, फोटो, निर्देशित पर्यटन
अत्तर "लेडी गागा" काला द्रव फेम: कामुकता एक foul को कगार मा छ
उल्लेखनीय ऋण - यो के हो?
Manor Pavlovka गर्न "अल्बर्ट": विवरण
Hypoallergenic सूत्र र यसको प्रजाति
खाद्य पदार्थ मा प्रोटिन: सामग्री प्रति दिन कुल रकम भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तर महत्त्वपूर्ण छ
कोर सञ्चालन र अन्य प्रदर्शन संकेतक को लाभकारी कसरी निर्धारण गर्ने?